Cabdiraxmaan Sheekh Maadeey, oo Qoraal uu Kaga Cabanayo Jwxo-shiil iyo Beeshiisa Soo Gaadhsiiyey Shabakada rasaas.com – Rasaasa News
Apr 1, 2010 beeshiisa, Jwxo-shiil
Sida aad la wada socotaan kooxda Jwxo-shiil, oo ahayd koox ka faliidhantay Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeeniya [Jwxo], ayaa in badan si khaldan halganka uga turjumaysay iyada oo dabada la gashay dalka fidnaysan ee Eritrea.
Kooxda Jwxo-shiil, ayaa baryihii ugu dambaysay ceebteedu banaanka u soo baxaysay, ka dib kolkii ay qaaday talaabooyin fool fool xun, oo aan hore uga dhicin Jabhada iyo dadweynaha dhexdiisa midna intii uu halganka Jwxo horseedka ka tahay dalka ka jirtay. Arimahaas oo keenay in si aan wax ka qabad lahayn, uu halgankii fiicnaa u noqdo wax aan qiimo lahayn, xubno badan oo kooxdan ah, ayaa galay Itobiya, kuwana sababtooda ayaa loo qabqabtay, waxaa kale oo jira dilal badan iyo dunuub. Nacaybaka dadweynaha ka sokow waxaa ka jira kooxda dhexdeeda is nacayb aad u badan.
Hadaba, mid ka mid ah saraakiisha ugu saraysa kooxda Jwxo-shiil, oo magaciisa la yidhaahdo Cabdiraxmaan Maadeey, ayaa noo soo diray qoraalkan, oo uu kaga cabanayo Maxamed Cumar iyo beeshiisa.
Cabdiraxman Sheekh Maadeey
Waaan idin sallaamayaa qorayaasha rasaas.com, waxaan ahay hogaanka arimaha dibada ee ONLF garabka Maxamed Cumar. Runtii magac uun mooyee ma jirto wax hawl ah oo aan u qabto ururka aan sheeganayo, waxaan jirin wax qiimayn ama tixgalin ah oo uu i siiyo Maxamed Cumar, arintaasi kaligay ma aha ee kuligana waan qabnaa.
Halgan, baan dadkeena ugu maqanahay lakiin anaga ayaa naftanada hoos u ooyna, dhibaatada uu nagu hayo Maxamed Cumar darteed. Waxaa nalagu soo qoraa boggaga internetka anaga oo nalagu sheegayo hawlo anaan waxba kala soconin. Sawiradanada ayey haystaan koobi, kaas ay isticmaalaan mar walba soona cel celiyaan, ma jirto cid aan wax u sheegan karo oo kama warhayno dadka qora boggaga.
Maalin dhawayd waxay sheegeen in aan Joogo South Afrika Xaaskayga ayaa i weydiisay war ma laba Maadeey baad tahay mise mid kaliya, wa ahyo Maadeeyga la socda Maxamed Cumar ee South afrika jooga? Waxaan garan waayey wax alaale wax aan ku hadlo, caruurtayda ayaa igu yidhaahda Aabe iskaga bax urukan aad u shaqayso ma anaan fahmine, wax alaale wax aan sameeyo waan la ahay.
Faafinta wararkayga aanan waxba kala socon waa dambi, waxaana samaynaya wiilal yar yar oo Maxamed Cumar ka amar qaata, oo hadii aan la hadalana afka na goosan, oo nagu odhan wax la imaada, kolkaas ayaad hadli kartaane. Anigana wiilashayda ayaa xitaa iga diiday in ay yimaadaan meelaha aan mar mar ku kulano, ehelkii kalena ha sheegin, aniguna muddo dheer ayaan ku soo dhex jiray arintan halganka oo in aan ka shaqeeyo waan rabaa, laakiin bar aan u shaqeeyo ma kasaayo.
Waxaan damcay in aan Maxamed Cumar ka dhaadhiciyo dhamaadkii sanadkii hore in aanu shir qabano, si aanu isbadal u muujino oo bal ugu yaraan aan u helo wax aan ku doodno, runtii waan qoomameeyey in hadalkaasi afkayga ka soo baxo, waxaana la ii dalbay askar Eritrean ah.
Maxamed Cumar, kolka uu meel aadayo kaligii baa taga sababtuna waxaanu ogaanay in uu diidayo in la ogaado lacagaha jeebkiisa galaysa ee Jaaliyaadka, kuwaas oo ay dhamaantood gacanta ku hayaan dad xigtadiisa ah.
Runtii Cabdraxmaan ahaan dhibaato wayn baan ku qabaa, gumaysi baan la dirir is lahaa, laakiin naftayda ayaa gumaysi ku jirta aan ilaahay igu qabanin. Kama dhaqaaqi karo halgankii aan dhibaato badan u maray, ruux wax fikir ah u soo jeedinkara Maxamed Cumara naguma jiro.
Cabdiraxmaan ayaa qoraalkan soo raaciyey faahfaahin sidii aan ula xidhiidhi lahayn. Waxaanan la samaynay xidhiidh kaas oo aanu idiin soo dayn doono marka ugu haboon.